ဇနီးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ လူမင်း – We Love Cele
ပျော်ပျော်နေစေချင်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ လူမင်းကတော့ ချစ်ရတဲ့ဇနီးချော ခင်စံပယ်ဦးအတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားတွေပြောလာပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် လူမင်းကတော့ မေလ(၂၁) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောလာပါတယ်။ ဇနီးချောလေးကိုလည်း အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေတာပဲ မြင်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“(21. 5. 2020) Happy 36th Birthday ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ချစ်။မွေးနေ့ဆုတောင်းကို သူများနဲ့မတူအောင် ၊ကဗျာဆန်အောင် ၊မရို ရို အောင်ဘယ်လိုဘဲစဉ်းစား စဉ်းစားနောက်ဆုံး တော့ အရိုးဆုံးက တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါဘဲ၊ ပြီးတော့ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဆိုတာ နည်းနည်း လာသလားလို့လေ ၊ရင့်ကျက်ရတာတွေ ၊ ရောင့်ရဲရတာတွေ ကများလာရတယ်မဟုတ်လား ၊အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးဘဝကလို ဟက်ဟက်ပက်ပက် အပျော်မျိုး ခုနေ ရှာမှရှား ၊ ချစ် ကို ပျော်စေချင်တာ ၊ ပျော်အောင်နေပါ ၊ အပေါ်မှာ အသက်ကိုရေးလိုက်တာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ မိန်းမက နုဖတ်အုအက် နေတော့ အသက်မေ့နေမစိုးလို့ ” ဆိုပြီးတော့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့ မနက် ၁ နာရီက ဧရာဝတီလူမင်း အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇနီးချောလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုတော့ Surprise တောင် မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ လူမင်းက ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ခင်စံပယ်ဦးရဲ့ မွေးနေ့မှာ လူမင်းက သွေး အလှူကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ” မွေးနေ့လက်ဆောင် စပရိုက် မတိုက်တော့ဘူးနော်။ အားလုံးကမိန်းမလက်ထဲမှာ။ တကယ်တော့ လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲ့ပေမယ့် ရလာတော့လည်း တိုတိုလေး ပါ ၊ သမီးလေးနဲ့ သားလေးနဲ့ ယောက်ျားတို့မိသားစု။ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နေသွားကြရအောင်နော်” ဆိုပြီးတော့လည်း ဆက်လက် ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
လူမင်းနဲ့ ခင်စံပယ်ဦးတို့ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ခင်စံပယ်ဦးက ၁၄ နှစ်ငယ်တယ်လို့လည်း လူမင်းက မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်းဟာ (၁၆) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေး ဧရာဝတီလူမင်းနဲ့ သားလေး ဧဝရတ် လူမင်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်
လူမင်းဟာ အနုပညာအလုပ်တွေလည်း တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်သလို မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး နေထိုင်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်တွေမှာလည်း ဦးဆောင်နေရသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်း ရိုက်ကူးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ်နဲ့လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရသူ တစ်ယောက်ပါ။
ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ လူမင်းဟာ၂၀၁၃ ဇွန်လက စတင်ကာ ၂၀၁၇ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် လေးနှစ်ကျော် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လူမင်းဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ ရွှေမှုံကြဲတဲ့မိုးကောင်ကင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတော့ ကျန်စစ်မင်းနဲ့ အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ လူမင်းက ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့်မြိုင်ရာဇာတာတေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ ဆုကို ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Star Awards ဆုပေးပွဲမှာတော့ Actor In A Supporting Role Awardဆုကို ငယ်ကျွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။